အသံနှင့်အွန်လိုင်း-တိုင်မား - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
ရေနွေးငွေ့ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဈေးရှိပါတယ် - အသုံးပြုသူများသည် / ပြောင်းလဲမှုကိုဝယ် / ဂိမ်းများနှင့်မိမိတို့၏ပရိုဖိုင်အတွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံရောင်းချတဲ့နရော။ နှင့်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းများ၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများကိုအဆက်မပြတ်အတူတူလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြောင်း, ထိုသို့ငြီးငွေ့စရာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းသတိထားမိကြသည်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အရေးယူမှုအပြင်ထုတ်ကုန်ဝယ်ဖို့အချိန်ရှိသည်ဖို့မဖွယ်ရှိသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်စက္ကန့်များ၏တစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ကစားဤအရပ်မှအခန်းကဏ္ဍ, ကြီးလှ၏။
, ကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေမျှဝေ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအောင်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောကွန်ပျူတာအစီအစဉ်များနှင့်ဤအမှု၌ကူညီပေးဖို့ browser ကို extensions တွေကို, ဒုတိယ option ကိုသုံးစွဲဖို့ဦးစားပေး။ extensions (သင် browser မှာဒီ option ကို enable လျှင်) သင်သည်သင်၏ browser ကိုပိတ်လိုက်ပင်ပြီးနောက်အလုပ်လုပ်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုသူအားလုံးအခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်, ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များတောင်းဆိုကြသည်မဟုတ်။
ရေနွေးငွေ့ Inventory ကူညီဘာလဲ?
ဤ extension Yandex Browser ကိုတပ်ဆင်နှင့်ကလုပျနိုငျတယျဖြစ်ပါတယ်:
ဘာသာရပ်ဝယ်ယူရေနွေးငွေ့၏ကုန်သွယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ 1. အမြန်နှုန်း: အသုံးပြုသူ action ကိုအတည်ပြုဖို့ကို tick ထားရန်မလိုအပ်ပါဘူး,
ကိုယ့်တဦးတည်း button ကိုနှိပ်, ရောင်းချရန်ပစ္စည်းများကိုတက်ထားရန်နှင့်ကကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းရေနွေးငွေ့ပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် - 2. အရောင်းအရှိန်အဟုန်မြှင်။ ထိုသို့သောအရာဝတ္တုများ၏စျေးနှုန်းသည်အခြားရောင်းချသူထံမှအမှန်တကယ်စျေးနှုန်းထက် 1 တစ်ပြားမှနိမ့်ပါလိမ့်မယ်,
3. လျင်မြန်စွာသတ်မှတ်ပျောက်ဆုံးနေ element တွေကိုဝယ်ဖို့ကူညီပေးသည် - သုံးစွဲသူတစ်ခုတည်း set ကိုကနေတစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပစ္စည်းများရှိပါတယ်လျှင်, ဝယ်ပျောက်ဆုံးနေအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပစ္စည်းများကိုမဝယ်နိုင်,
ဖလှယ်ထွက်ယူသွားတတ်၏ဆိုပါက4တိုးချဲ့မှုအပေါငျးတို့သပစ္စည်းများစျေးနှုန်းရေတွက်နှင့်အရှင်လဲလှယ်အကျိုးရှိသောရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်;
6. ကြည့်ကိရိယာများတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကို item ဇာတ်ကောင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦး HUD နှင့်မီတာအဖြစ်ဥပမာအားအသုံးပြုသည်ရှိမရှိထားရှိမရှိဆိုတာကိုပြသ P ကို။ ။ ,
သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ် browser ကို, ဖလှယ်မှုနှင့်မှတ်ချက်များ၏အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာ7display တွေတစ်အကြောင်းကြားစာ;
9. avtoregulyator စျေးနှုန်းများရှိပါတယ်;
ချဲ့ထွင်များတွင် program ကိုအသုံးပြုခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုအနည်းငယ်ကတခြားစိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်။
Installing ရေနွေးငွေ့ Inventory ကူညီ
သင်တို့ရှိသမျှသည်အခြားသောအဖြစ်အတိအကျတူညီလမ်းလိုအပ်ဤ extension Install လုပ်ပါ။ ဂူးဂဲလ် extensions တွေကိုအွန်လိုင်းစတိုးသွားပြီးနာမတော်ဖြင့်ရှိတိုးချဲ့ရှာဖွေနေပါသည်, ဒါမှမဟုတ်ပဲဒီ link ကို click: //chrome.google.com/webstore/detail/steam-inventory-helper/cmeakgjggjdlcpncigglobpjbkabhmjl
extensions တွေကို Install - ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "တည်ထောင်":
ကျနော်တို့ installation ကိုအတည်ပြု:
installed extension ကို browser ကို toolbar ကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
တပ်ဆင်ပြီးနောက်, သငျသညျထို site steamcommunity.com ရန်၎င်း၏တစ်ဦးတည်းကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ရဲ့ login ပြီးနောက် extension ကို configure နိုင်ပါသည်အစီအစဉ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှလက်လှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။